Niato ny fifamoivoizana avy any Sina mankany Eropa
Naato ny fifamoivoizana avy any Sina mankany amin'ny sisintany miaraka amin'i Kazakhstan sy Mongolia, afa-tsy ireo dia lavitra. Ity fampiatoana ity dia efa nisy nanomboka ny 8 desambra ary tsy nitatra hatramin'ny 16 desambra 6 hariva. Ny antony fampiatoana dia fitohanana mafy ao amin'ny borde ...
Ny fomba fialan'ireo mpanamboatra IVD ary mijanona eo ambanin'ny toe-javatra misy ny valanaretina
Hatramin'ny nipoahan'ny virus coronavirus vaovao dia voasarona ao amin'ny tanin'i Sina ny zavona. Ny valin'ny firaisankinan'ny Vahoaka Nasionaly dia namaly tamim-pahavitrihana ny “valanaretina” tamin'ny ady tsy nisy setroka. Na izany aza, ny onja iray dia tsy nongotana ary iray hafa no nanomboka. Ity epid vaovao ity ...